लोडसेडिङ फर्काउन ओलीका यि मान्छेले कति पैसा लिएका छन् ? जनताले कुलमानको जयजयकार गरिरहँदा लोडसेडिङ गर्न खोज्ने यि को हुन् ? – Gazabkonews
लोडसेडिङ फर्काउन ओलीका यि मान्छेले कति पैसा लिएका छन् ? जनताले कुलमानको जयजयकार गरिरहँदा लोडसेडिङ गर्न खोज्ने यि को हुन् ?
काठमाडौं – उर्जामन्त्रीको दोस्रो का र्याकालका लागि टोपबहादुर रायमाझीले भ र्खरै मात्र पदभार सम्हालेका छन्। तर, सं योग नै मान्नुपर्छ उनले प दभार सम्हालेको २४ घण्टा न बित्दै राजधानीमा लो डसेडि ङकै भा न पार्ने गरी विजुली जा न थालेको छ। लो डसेडि ङकै शैलीमा वि द्युत जा न था लेपछि यतिबेला फेरि १८ घण्टे लो डसे डि ङ का लको स म्झना शुरु भएको छ।
हाल उर्जामन्त्री भएका टोपबहादुर संविधान जारी भएपछि बनेको प्रधानमन्त्री केपी ओली नेतृत्वको सरकारमा यसअघि नै उ र्जामन्त्री थिए। २०७२ सालमा उनी उर्जामन्त्री रहँदा देशमा १८ घण्टा नै लो ड से डि ङ हुने अ वस्था समम आएको थियो। त्यतिबेला वि द्युत प्रा धिकरणका एमडी मुकेश काफ्लेसँग मि लेर रायमाझीले लो डसेडि ङ ग राएको भन्दै उनको आ लो चना भएको थियो।
त्यतिबेला मन्त्री रायमाझी लो डसेडि का सा क्षी ज स्तै थिए। तर, ओली सरकार ढ ले पछि बनेको पुष्पकमल दाहाल प्र चण्ड नेतृत्वको सरकारले नेपाल विद्युत प्राधिकरणको प्रबन्ध निर्देशकमा कुशल व्यवस्थापक कुलमान घिसिङलाई नियुक्त गर्‍यो। उनै कुलमानले १८ घण्टे लो ड से डिङ को अ न्ध कार ह टाएर मुलुकमा च म त्कार गरिदिए।
हाल कुलमान घिसिङको कार्यकाल स किएको छ। उनको पुनर्नियुक्तिो लागि उ र्जामन्त्री वर्षमान पुनले को शिस गरे पनि प्रधानमन्त्री ओलीले रो केका का रण हालसम्म पनि उनको नि युक्त हुन स केको छैन। कुलमानको अ भा व र उर्जामन्त्री प रिवर्तन भएकै दिनदेखि नेपालमा फेरि झ्या प झ्या प बत्ति जान थालेपछि फेरी लो डसेडि ङ हुने त्रा स बढेको छ।
यता उर्जामन्त्री भएपछि प दभार ग्र हण गर्दै रायमाझीले एमसीसीबारे अ ना वश्यक कुरा न गर्न भन्दै एमसीसी कार्यान्वयन हुने बताएका छन्। अहिले पनि देशको दूरदराजमा विद्युत बिस्तार हुन नसकेको र उद्योगहरुमा पर्याप्त बिजुली पुग्न नसकेको दृश्य हेरिरहँदा रायमाझीले कुनै नै तिकताले विद्युत व्या पारको कुरा गरिरहेका छन्, त्यो भने शं काकै विषय बनेको छ।
नेपालमा अमेरिकी शै न्य र णनीतिअनुसार एम सी सी प रियोजना ल्याउन खोजिएको भन्दै त्यसको व्या पक आ लोचना भएको छ। आफ्नो देशको राष्ट्रिय सु र क्षामा ख तरा पर्ने भन्दै श्रीलंकाले एम सी सी अ स्वीकार गरे पनि ओली ने तृत्वको सरकारले एमसीसी पा स गराउन जो र जु लु म गरिरहेको छ।